MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: မနောပွဲတော် ကျင်းပရန် ကချင်တိုင်းရင်သားများအကြား ကွဲလွဲမှုဖြစ်နေ
မနောပွဲတော် ကျင်းပရန် ကချင်တိုင်းရင်သားများအကြား ကွဲလွဲမှုဖြစ်နေ
သုံးနှစ်ကြာ ရပ်ဆိုင်းထားခဲ့သော ကချင်မနောပွဲတော်ကို ကျင်းပရန် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ စီစဉ်နေသော်လည်း ရိုးရာအစဉ်အလာအရ ကချင်လူမျိုးများ စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဗဟိုကော်မတီ၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့်သာ ပြုလုပ်ရန် ကချင်တိုင်းရင်းသားများက လိုလားသည်ဟု ဇိုင်ဝါးမျိုးနွယ်စု ဗဟိုကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးလနူးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သည် ၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် ၆၇ကြိမ်မြောက် ကချင်ပြည်နယ်နေ့ အထိမ်းအမှတ် မနောပွဲတော်ကို ကျင်းပရန် ၂၀၁၁ခုနှစ်က ဖွဲ့စည်းခဲ့သော မနောပွဲတော် ဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီကို သြဂုတ်လ၈ရက်က ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး အစည်းအဝေးတွင် တာဝန်ပေးခဲ့၍ ကချင် တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စုဝင် ၆ခုနှင့် သဘောထားကွဲပြားမှု ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
"မနောပွဲတွေ မလုပ်ဖြစ်တဲ့ ၃နှစ်မှာ အစိုးရအဖွဲ့က ကချင်ပြည်နယ်နေ့ကို ပြည်ထောင်စု အစိုးရရုံးက မြက်ခင်းပြင်မှာ ညစာစားပွဲတွေလုပ်ခဲ့တာပါ။ ဒါကြောင့် အစဉ်အလာအတိုင်း ဗဟိုကော်မတီကို လုပ်ခွင့်မပေးရန် မနောပွဲလုပ်ချင်ရင် အစိုးရရုံးရှေ့မှာပဲလုပ်စေချင်တယ်" ဟု ဦးလနူးက ဆိုသည်။
ထို့ကြောင့် မနောပွဲတော်ကျင်းပရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ကချင်မျိုးနွယ်စုဝင် ၆စု၏ သဘောထားများကို ကချင်လူမျိုးများ စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဗဟိုကော်မတီက သြဂုတ်လ ၂၅ရက်က ကောက်ယူခဲ့ရာ ကန့်ကွက်လိုခြင်း မရှိသော်လည်း မနောပွဲတော်အား ကချင်လူမျိုးများ စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဗဟိုကော်မတီကသာ ဦးဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိကြသည်ဟု ဆိုသည်။ ခွင့်မပြုလိုပါက ရိုးရာအစဉ်အလာအတိုင်း မြစ်ကြီးနားမြို့ စီတာပူရပ်ကွက် မနော်ကွင်း၌ မကျင်းပဘဲ သီးခြားကွင်းတစ်ခုတွင်သာ လုပ်ရန် ဇိုင်ဝါးမျိုးနွယ်စု ဗဟိုကော်မတီက သဘောထားကြေငြာချက် ထုတ်ထားသည်။
ပြည်နယ်အစိုးရ၏ တိုက်တွန်းမှုဖြင့် မနောပွဲတော် ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီက စက်တင်ဘာလအတွင်း ပွဲတော်ဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီများဖွဲ့ကာ မနောပွဲတော်ကို ဇန်နဝါရီ ၅ရက်မှ ၇ရက်အထိ ကျင်းပရန် သတ်မှတ်ထားသည်ဟု ပွဲတော်ဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးလခရိလအောင်က ပြောသည်။
ကချင်ပြည်နယ်နေ့ အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် မနောပွဲတော်ကို မြစ်ကြီးနားမြို့ စီတာပူရပ်ကွက် မနောကွင်းတွင် ဇန်န၀ါရီ ၁၀ရက်၌ နှစ်စဉ်ပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (KIA) နှင့် အစိုးရတပ်မတော်တို့ တိုက်ပွဲများ ပြန်လည် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ၂၀၁၁ခုနှစ်မှ စတင်၍ မနောပွဲတွေများကို ရပ်ဆိုင်းထားခဲ့သည်။
at 9/03/2014 05:53:00 PM
Unknown September 5, 2014 at 12:50 PM
n galaw na hpe ra ai
Anonymous September 6, 2014 at 11:40 PM
ခေါင်ရည် အရက် စပီ သောက်ပြီးကတာဘယ်လိုကကရတာကို အကျယ်ချဲ့ မနေနဲ့ ။
အမှန်ကိုသာမြင်ကြပါမျက်ကန်းမျိုးချစ် မဖြစ်ကြပါစေနှင့်…. နှင့် ဆောင်းပါးများ စုစည်းမှု
(ကိုဇော်ဝမ်းမောင် FB စာမျက်နှာမှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။) အမှန်ကိုသာမြင်ကြပါမျက်ကန်း မျိုးချစ် မဖြစ်ကြပါစေနှင့်…. အတိအကျ စွပ်စွဲနေခြင်းမဟ...
(ရွှေဟင်္သာသတင်းဌာန) နေ့လည် တနာရီခန့်မှ စပြီး ဟော်ဝစ်ဇာ လက်နက်ကြီး အမြောက် ကျည်ဆံများ ထောင်နှင့်ချီ အပစ်ခတ် ခံနေရသည့် ခါယာတောင်သည် ညနေ ...
အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး သဘောတူညီမှုစာချုပ် ဘယ်အချိန် လက်မှတ်ထိုးနိုင်မလဲ
(Eleven Media Group) ရွှေသဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း ဖြတ်သန်းရာ ဒေသများနှင့် ပိုက်လိုင်းအနီးတွင် ရှိနေသော တပ်မတော်တပ်ရင်း အင်အားပြမြေပု...
▼ August 31 - September7(25)
ရဲအရာရှိများ တပ်မတော်အရာရှိများအား အခွန်ဆောင်ပြီး ...
မိုင်းနားစစ်ဘေးဒုက္ခသည် စခန်းတွင် အိမ်သာမလုံလောက်သြ...
မန္တလေး- မြစ်ကြီးနားလမ်းပိုင်း အဆင့်မြှင့်ရန် တရုတ်...
ဖားကန့်တွင် ကျောက်တူးလုပ်ငန်း မစနိုင်သေး
UNFC ပထမဆုံး အကြိမ်ညီလာခံ ၏ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်
UNFC အစည်းအဝေးမှ အဖွဲ့ဝင်များ ရာထူးသစ် ပြန်လည်ခန့်အပ်
UNFC အဖွဲ့ဝင်သစ်များလက်ခံကာ သုံးပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံ...
ကချင်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ၃ နေရာယ...
မနောပွဲတော် ကျင်းပရန် ကချင်တိုင်းရင်သားများအကြား က...
UNFC ဥက္ကဋ္ဌသစ်အဖြစ်လက်ရှိ ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းအား ပြန်လည်ရွေးခ...
KNU ပြန်ပါဝင်ရေး ကြိုးစားဖို့ UNFC ညီလာခံ ဆုံးဖြတ်
ကချင်အသင်းတော်များ ကချင်ဒေသများ မူးယစ်ဆေးဝါး ကင်းစ...
UNFC မှ ကေအင်န်ယူ နုတ်ထွက်ခြင်း တိုင်းရင်းသားညီညွတ...
တောင်သူများ၏လယ်မြေများအား လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးမှ သိမ...
UNFC နဲ့ KNU အကွဲအပြဲ တိုင်းရင်းသားတွေကို အစိတ်စိတ...
UNFC ညီလာခံက KNU ထွက်ခွာမှု ဝေဖန်ချက်မျိုးစုံ ထွက်ပေါ်
UNFC နှင့် ပူးပေါင်းမှု ယာယီ ရပ်ဆိုင်းရန် KNU တရားဝ...
UNFC အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်မှုမှ KNU ရပ်ဆိုင်းကြောင်း
ပထမအကြိမ် UNFCအစည်းအဝေး သဘောတူညီချက်မရသဖြင့် KNUေ...
UNFC နှင့် KNU မူဝါဒနှင့် အမြင်ကွဲပြားနေသော်လည်း န...
UNFC နှင့် ပြည်တွင်းအင်အားစုများ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွ...